Mpanamboatra mpamatsy sy mpamatsy eto an-tany China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Metric Fasteners
Afaka manome ny karazam-panafahana amerikana / Standard Eoratorana metaly standard isika. Ny habetsahantsika izay azontsika atao mifanaraka amin'ny fepetra takiantsika, anisan'izany ny fitsaboana amin'ny tany, ny fanantenana hahalala bebe kokoa ny zavatra takianareo, dia hanome ny sarany tsara indrindra ho anao izahay.
Ny rantsam-baton'ny tadiny, fantatra amin'ny hoe fianarana ihany koa, dia tehaka lava lava izay matevina amin'ny tendrony roa; Ny kofehy dia mety hanitatra ny halavan'ny tehina. Natao hampiasaina amin'ny fihenjanana izy ireo. Ny rantsam-batan'antona amin'ny baoritra misy tahony dia matetika antsoina hoe all-thread. Ny WENAP dia manolotra karazana fitaovana maromaro, endriny, kofehy ary lanjan'ny tadin'ny hoditra sy bolongana.